Matsiye egrey - Ndingaavanza sei | Bezzia
Susana godoy | 15/06/2022 12:00 | Runako
Iwe unoda kuvanza bvudzi jena patsiye dzako? Ipapo isu tine akatevedzana ematipi aunofanira kuisa mukuita. Zvinowanzoitika kuti rimwe zuva, patinenge tichibvisa nzvimbo iyi, tinoona kuti rimwe bvudzi jena rakatora sei nzvimbo iyi. Yave nguva yekuita chimwe chinhu kuita kuti hura hwese hutaridzike ruvara rumwe chete.
Sei ndine bvudzi jena patsiye dzangu? Nekuda kwekurasika kuri kuita melanin, tinotanga kuona vhudzi jena. Asi kwete mutsiye chete asi bvudzi rinenge rave naro zvakare. Iwe haufanirwe kunetseka nekuti pane nguva dzose nhevedzano yematanho uye matipi aunogona kuisa mukuita nekukurumidza sezvinobvira. Ziva zvese zvatinounza!
1 Viga tsiye grey ne makeup
2 eyebrow tint
3 Mishonga yemumba yegrey eyebrows
Viga tsiye grey ne makeup
Sezvaunoziva, makeup ndeimwe yebetsero huru yatinogona kuva nayo. Nekuti kana iri yekunyepedzera, inozadzisa basa rayo. Zvechokwadi tinofanira kugara tichisarudza zvigadzirwa zvakanakisisa, uye izvo zvakananga. Mune ino kesi iwe unogona kuwana eyebrow penzura kana, ine makeup zvakare yakagadzirirwa tsiye. Kana uine mabhurawuza akareruka, saka zviri nani kusarudza penzura kana ruvara rwakareruka zvishoma pane mumvuri webhurawu rako..
Nguva kana uine bvudzi rakasviba zvakanyanya saka enda kune mumvuri kana maviri kunyange kusviba. Paunenge wasarudza, unofanirwa kusanganisa tsiye zvakanaka kuitira kuti ruvara ruparadzirwe zvakaenzana. Iwe uchadhirowa mitsetse yetsiye dzako woizadza nokungwarira. Nokuda kwekupedzisira iwe unogona kuzvibatsira nebhurashi. Izvi zvinofanirwa kunge zvakanyanyisa, kuitira kuti ive nekunyatsojeka. Iwe unogonawo kuita zvimwechetezvo nepenzura uye wobva wanyura zvishoma nebhurashi. Pfungwa ndeyokuti nzvimbo yakafukidzwa asi nekupedzisa kwepanyama.
Sezvo isu tine dhayi kuti tikwanise kuratidza mavara akasiyana mubvudzi redu, mune yetsiye panewo chaiwo. Nenzira iyi unogona kuvanza bvudzi jena mukubwaira kweziso. Hongu, usadhaye tsiye nedhayi rebvudzi, nekuti unogona kuve nekushatirwa munzvimbo. Nokudaro, unofanira kutenga dhayi chaiyo uye wotevera mirairo yayo. Izvi zvinowanzozvishandisa munzira yekukura kwebvudzi, asi zvino mune zvakapesana. Nenzira iyi tinoita shuwa kuti zvese zvakafukidzwa zvakanaka. Tichamirira asingasviki maminetsi gumi uye ndizvozvo. Kune dzimba dzakati wandei dzine matinji eziso uye mamwe acho atove neayo zvigadzirwa nenzira yemapenzura kuita kuti basa rive nyore.
Mishonga yemumba yegrey eyebrows
Kune rumwe rutivi unogona kuita chamomile senguva dzose. Kana kwave kutotonhora, unofanira kusanganisa zvipunu zvina nea pinch ye turmeric (zvishoma zvishoma pane hafu yepunipuni). Iye zvino, tichasanganisa zvakanaka uye ichave yakagadzirira kushandiswa. Zvechokwadi, zvakanakisisa kuzviita nebhurashi. Unosiya anenge maminitsi mashanu chete uye wogeza nemvura.
Isawo zvimwe black tea infusion Inoshanda. Nekuti iyi ine pigment inovanza imvi. Asi ichokwadi kuti ndezvenguva pfupi chete.
kofi uye cocoa ndezvimwe zvezvinhu zvikuru zvatinosanganisa zvinogona kupa tsiye dzedu kuti ruvara rwakasviba, tichiti zvakanaka kune vhudzi jena. Inofanira kuva kofi yakasviba necocoa powder uye zvose zvakanyatsosanganiswa. Kana musanganiswa wacho uchibuda mvura yakawanda, saka unogona kuwedzera uchi hushoma. Nezvo iwe uchaona kuti inonamatira sei zviri nani kune ganda rako.
Sezvaunoziva, zvinyengeri izvi zvose zvichapa ruvara kune bvudzi, asi zvine musoro hazvizogari. Zvinogona kungotaurwa kuti vachave vakakwana kuti vabude mumatambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Matanho ekuvanza bvudzi jena mutsiye
Email Kushambadzira, chishandiso chakakosha chebhizinesi rako